Huawei Watch GT3 bụ ido nsọ nke usoro na-aga nke ọma [Analysis] | Akụkọ Ngwa
Miguel Hernandez | 01/12/2021 09:00 | Emelitere ka 27/11/2021 16:55 | Ngwa, General, Nyocha, smartwatch
Wearables na-na ejiji, n'agbanyeghị eziokwu na ha na-eyighị ka emecha malite, n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, n'agbanyeghị nkwụsị nke ọrịa na-akpata, ndị a smart ese aghọwo ewu ewu ekele ha na-apụghị ịgụta ọnụ functionalities na n'ezie na mma nke ha arụmọrụ. N'okwu a Ọ dịla anya Huawei enyela ụfọdụ nhọrọ kacha mma na mpaghara ahụ nke smartwatches, ọ ga-aga n'ihu na-eme ya.
Anyị na-enyocha Huawei Watch GT 3 ọhụrụ ka edobere dị ka nrụcha nke ụdị gara aga ma na-ejigide nkwa ya siri ike na Harmony OS. Anyị na-enyocha smartwatch Huawei kacha ọhụrụ na nke kachasị ike ruo taa, chọpụta na anyị.
1 Nhazi a na-amata nke ọma
3 Sensọ na ojiji dị iche iche
4 Ọzụzụ, ojiji na autonomies
Nhazi a na-amata nke ọma
N'okwu a, Huawei achọghị ịpụ na canons ya gbasara smart smart, na-edebe akụkụ nche ọdịnala anya karịa ihe ụdị ndị ọzọ dị ka Apple na Xiaomi chọrọ. Anyị nwere igbe abụọ, 42,3 x 10,2 millimeters na 46 x 10,2 millimeters dabere na mkpa anyị. Elekere ahụ ga-atụ ihe dịka gram 35/43 na-enweghị eriri, ọ na-adịkwa ka a nụchara anụcha ma wuo ya nke ọma, yana omenala maka akara China. N'ihe banyere ihe nlereanya a tụlere, ọ na-agụnye eriri akpụkpọ anụ na-acha aja aja na igwe anaghị agba nchara na ọdịdị ya, mara mma na agba.
Ụdị: 42 na 46 millimeters, omenala na "egwuregwu"
Agba: Gold, Rose Gold, Steel na Black.
Eriri: Milanese, silicone, akpụkpọ anụ na ígwè.
Ihe mkpuchi seramiiki na azụ
N'akụkụ a, anyị amaraworị na anyị nwere nsụgharị nke nwere aka nke abụọ na etiti ma ọ bụ omenala dabere na ihe nlereanya a họọrọ na akụkụ nke ihuenyo ahụ. Ekwesịrị ikwupụta ya, ka ọ ghara ịgbagha onye na-agụ ya, na anyị na-enyocha ụdị nke 46-millimeter na eriri akpụkpọ anụ na-acha aja aja na ihe mkpuchi omenala nke ígwè. Site n'echiche m, elekere na-edobe oke nke ọma, nhazi na-enweghị ike ịgbanwe na mmetụta nke ntụgharị na ịdị mma dị mkpa, ọ nwere ike iso gị gaa na ihe omume nkịtị na mgbatị ahụ, ihe ị ga-eburu n'uche mgbe ị na-akwụ ụgwọ nke njirimara ndị a.
N'okwu a Huawei ahọrọla maka ARM Cortex-M, na-enweghị mmejuputa atumatu n'ụzọ dị otú a processors nke mmepụta nke ndị na anyị maara nke ukwuu. Nke a bụ ozi ọma n'ihi na ọ na-emesi ike ịdị iche iche nke Harmony OS, mana ọ na-eme ka anyị na-eche maka ọdịnihu nke ndị nrụpụta ika Asia. Banyere ebe nchekwa RAM anyị enweghị ozi akọwapụtara, anyị nwere gbasara 4 GB nke nchekwa mkpokọta, nke a maara nke ọma dị ka «ROM».
Igwe okwu agbakwunyere maka ịkpọ oku
Anyị nwere elekere nwere njikọ Ọgbọ nke 5.2 WiFi yana Bluetooth XNUMX yabụ anyị nwere ohere ikuku ikuku dị iche iche. Anyị enweghị oge a (ee n'ụdị gara aga) lenwere ike ijikọ eSIM ma ọ bụ kaadị SIM mebere, yabụ ị ga-enwe ntụkwasị obi zuru oke na ekwentị. Ngwa ahụ dakọtara na Harmony OS, Android 6.0 gaa n'ihu yana iOS 9.0 na-aga n'ihu, na-eme ka ọ bụrụ ihe ọzọ na-agbanwe agbanwe na, agbanyeghị, agaghị ekwe ka anyị na-emekọrịta ozi na-abụghị Huawei / Honor ngwa ngwa na ngwa ngwa.
Sensọ na ojiji dị iche iche
CKedu ka ọ ga - esi bụrụ ma ọ bụghị, Huawei Watch GT 3 a Keta ọtụtụ ihe mmetụta sensọ, gafere ndị na-enyocha ọnụọgụ obi na ọbara oxygen saturation mita, Huawei chọrọ ịtụgharị Watch GT 3 ka ọ bụrụ ihe ọzọ maka egwuregwu na-enweghị atụfu ihe ọ bụla, maka ihe ndị a niile ga-eso anyị:
Ihe mmetụta okpomọkụ nke ahụ (a ga-arụ ọrụ na mmelite n'ọdịnihu).
Ihe mmetụta nrụgide ikuku ( barometer).
Ihe a niile na mgbakwunye na usoro nha nha nke ọnọdụ nke GPS, GLONASS, Galilleo na QZSS na ụdị ya niile. A na-ekekọrịta njirimara teknụzụ karịa ihuenyo na nnwere onwe na nha na ụdị dị iche iche. Na nke ahụ bụ otú anyị na-aga n'ihu na-ekwu banyere ihuenyo.
Ụdị 46-milimita (nke a nwalere) nwere otu panel AMOLED de 1,43 inch nke na-anọchite anya ntakịrị uto ma e jiri ya tụnyere ụdị nke gara aga, yana mkpebi nke 466 × 466 si otú a na-enye njupụta pixel nke 326PPI. Maka akụkụ nke ya, anyị nwere otu mkpebi ahụ na ụdị 42-millimita, yabụ njupụta pixel na-abawanye ruo 352PPI, nkọwa zuru ezu site n'echiche anyị enweghị ike ịghọta n'etiti otu ụdị na nke ọzọ.
Ọzụzụ, ojiji na autonomies
Banyere customization n'ime Akaụntụ anyị na-ahụ usoro nke Huawei ihe karịrị ngalaba 10.000 enwere ike nbudata, Ihe ka n'ọnụ ọgụgụ bụ n'efu, nke ga-eme ka o siere gị ike ịchọta nke masịrị gị. Ọ nwere bezel na-agbanwe agbanwe ka mma, yana profaịlụ bọtịnụ mmekọrịta nke nwere mmetụ ahụ dị mma ugbu a na njem site n'echiche anyị.
Na ngalaba a Huawei kwere anyị nkwa na TruSeen 5.0+ nkenke ka ukwuu na nha ọzụzụ, na nke bụ eziokwu bụ na ule anyị adịla mma, na-egosi nsonaazụ ya na ihe ndị ọzọ dị elu dị ka Apple Watch ma ọ bụ Galaxy Watch, niile ekele maka ndị na-achọpụta foto asatọ ya.
Nkwalite algọridim AI na oke ngbanwe nke 5LPM.
Amamọkwa gbasara nkụchi obi na-adịghị mma.
Onye enyemaka olu agbakwunyere.
Na-enyeghị anyị data ziri ezi na mAh, ụlọ ọrụ Eshia ekwela anyị nkwa ụbọchị 14 nke nnwere onwe nke anyị enweghị ike nweta, anyị nọrọ n'etiti ụbọchị 11 na 12 na-eji ya eme ihe mgbe niile. N'ọtụtụ akụkụ dị ka ngwa na njikwa data, interface onye ọrụ na ahụmịhe izugbe anyị na ya, nche enyebeghị ọtụtụ ihe dị iche na gara aga version nke otu, na nke a bụ kpọmkwem a mma mgbe ma ọ bụrụ na anyị na-ewere n'ime akaụntụ na ha e zuru okè. A na-eji ọnụ ahịa mechie ihe a niile site na euro 249 maka ụdị 46-millimita na euro 229 maka ụdị 42-millimita, Ọnụ ahịa ndị eze gbanwere dabere na ike ha, na-agbanwe agbanwe na nha ọnụahịa dị mma nke siri ike dakọtara na mpaghara ahụ. Maka 329 anyị ga-enwe ụdị titanium nke a na-amaghị ọnụnọ ya na Spain ugbu a.
Lelee GT 3
Ihe na: December 1 nke 2021
Nhazi a nụchara anụcha nke ukwuu
Juputara na teknụzụ na ihe ndị ọzọ, na-enweghị enweghị ihe mmetụta
Nnukwu nhazi ikike
Anyị ga-amarịrị bezel na-atụgharị
Ihe nhụta onye ọrụ bụ ihe ọhụrụ nke na ọ chọrọ mmụta
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Huawei Watch GT3 bụ idobe nke usoro na-aga nke ọma [Analysis]